तेस्रोपटक कलेजो प्रत्यारोपण- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — त्रिवि शिक्षण अस्पतालले तेस्रो पटक कलेजोको सफल प्रत्यारोपण गरेको छ । प्राडा रमेशसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा पाँच महिनाभित्र तेस्रो पटक कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको हो ।
कलेजोको सिरोसिस भएका रुपन्देहीका ५८ वर्षीय व्यक्तिलाई उनका २७ वर्षीय छोराले कलेजो दिएका हुन् । करिब ८ घन्टा लगाएर गरिएको उक्त प्रत्यारोपणपछि बिरामी हाल आईसीयूमा स्थिर अवस्थामा छन् । तेस्रो प्रत्यारोपणमा समेत शिक्षण अस्पतालको प्रत्यारोपण टिमलाई भारत, दिल्लीस्थित फोर्टिस अस्पतालका डा. विवेक विजको टिमले सघाएको थियो ।
‘निरन्तर ३ वटा प्रत्यारोपण गर्दा बिस्तारै सिस्टम बस्न थालेको छ, अझै ८/१० वटा प्रत्यारोपणमा विदेशी विज्ञको सहयोग लिनेछौं,’ डा. भण्डारीले भने, वर्षमा १२ वटासम्म प्रत्यारोपण गर्ने लक्ष्य छ ।’ उनका अनुसार कलेजोको प्रत्यारोपणमा करिब २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले विदेशी विशेषज्ञको सहयोगमा ३ वटा कलेजोको प्रत्यारोपण गरिसकेको छ ।
प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ ०९:४५
‘हामीले यहाँ जे देख्यौं, त्यो विश्व सम्पदा केन्द्रमा बुझाउँछौं,’ ग्यामिनले भने, ‘खतराको सूचीमा राख्ने वा के गर्ने भन्ने प्रस्ताव विश्व सम्पदा समितिले गर्छ ।’ उनी भूकम्प गएको वर्ष मिसन टोलीमा सहभागी भई नेपाल आएका थिए । त्यसबेलाको भन्दा काममा धेरै सुधार आएको आफूले पाएको उनले बताए ।
प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ ०९:४४